नेपाल आज | सरकार–राप्रपा वार्ता : राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा तुहाउने षडयन्त्र
सरकार–राप्रपा वार्ता : राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा तुहाउने षडयन्त्र
अहिले बजारमा एउटा हाँसोको बिषय छ– कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र सरकारबीचको वार्ता ।
पहिलो चरणको वार्ता सकिएको छ र दोस्रो वार्ताको तयारी भैरहेको छ । यो वार्ता के का लागि ? सामान्य एक नागरिकको मनमा केही प्रश्न उठेकाछन् ।
राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने बिषयमा सरकार वार्ता किन गर्दैछ ?
के सरकारले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डालाई मान्यता दिएको हो ?
हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको बिषय बिधानमा राखेपछि संविधान विपरित भन्दै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता नहुने, तर सरकारले चाहिं वार्ता गर्ने ?
कमल थापा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच साँठगाँठ छ । हिजो सरकारमा पनि संगै थिए । हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको बिषय बिधिवतः रुपमा समाप्त गर्न वार्ताको नाटक हो ?
यी प्रश्नको उत्तर आएको छैन । सरकार र राप्रपा दुवै आफू अनुकुल जवाफ दिइरहेका छन् । उनीहरुले दिएको जवाफ पत्याउनु पनि मुर्खता हुनेछ, किनभने ढाँटछलको राजनीतिको इतिहास दुवै पक्षको छ ।
पशुपतिशम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीबीच एकतापछि बनेको राप्रपा संयुक्तका नेता तारानाथ लुँइटेलका अनुसार सरकारले बिधिवतरुपमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा तुहाउन वार्ता गरिहेको छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्दै बखान गरेको, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा साक्षी बसेको जस्ता कुराले थापामाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । उनी राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डामा इमान्दार छन् भन्ने कुरा उनकै पार्टी भित्र शंका छ ।
नेता थापाले रथयात्राको नाममा गरेको मेची महाकाली अभियान नौटंकी मात्र भएको टिप्पणी गरे । यस्ता नौटंकीले मुलुकमा परिवर्तन नहुने लुँइटेलको दाबी छ ।
तथापी, मुलुकमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना नहुने हो भने मुलुक संकटमा पर्नेछ । मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ । यसका लागि के प्रजातान्त्रिक, के बामपन्थी सबै शक्तिहरुले आपसमा मिलेर गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेज गर्नु अनिवार्य रहेको नेता लुँइटेल बताउँछन् ।
राप्रपा संयुक्तको मुख्य उद्देश्य नै राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापनासंगै संघीयताको ठाउँमा विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था गर्ने भएको लुँइटेलको स्पष्टोक्ति छ । उनले अध्यक्ष राणा र लोहनीको नेतृत्वमा नै मुलुकले राजनीतिक काचुली फेर्ने दाबी गरे । अध्यक्ष राणा र लोहनी बाहेक नेपालका राजनीतिक दल भित्र निष्कलंक नेता पाउन मुश्किल भएको जनाउँदै लुँइटेलले भने, ‘ हामी ३० लाख जनता सडकमा उताछौं, जनदबाबमा संविधान फेरेर हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था कायम गरेर छोड्छौं । ’
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंगै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा र मन्त्री इस्तियाक रायले राजसंस्थाको अभियानबिरुद्ध अभिव्यक्ति दिंदै धम्काउने काम गरेका छन् । जुन संविधानको जगमा बसेर राज्यश्रोतको दोहन गरिरहेका छन्, त्यही संविधानको व्यवस्था बमोजिम गतिविधि गरिरहेका दल र तीनका नेताहरुलाई धम्काउन लाज लाग्दैन ?’ लुँइटेल प्रश्न गर्छन् ।
आतंकवादीको आँखा श्रीलंकाहुँदै दक्षिण एशियामा पनि प्रवेश गरिसकेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै आक्रमण हुने सम्भावना छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल गर्ने भूमीकारुपमा विकसित भैरहेकाले सरकार र सुरक्षा संयन्त्र निकै सजग हुनुपर्ने हुन्छ ।
‘ हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली, सो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु होली वाइन खानमै व्यस्त छन् । यसले धार्मिक युद्ध र आतंकवादी आक्रमणको सम्भावनालाई झन बढाएको छ । बेलेमा ध्यान नपुर्याए हाम्रो अनिष्ट टर्ने छैन । ’ लुँइटेल बताउँछन् ।